Mdg.milk.agruculture.rice.rural development1, SlideSearchEngine.com
Information about Mdg.milk.agruculture.rice.rural development1
Milk Agriculture Wagyu Rice Rural-Develoment MYANMAR
MDG Series milk.and.alcohol page 1-6 wagyu.milk.and.meat.myanmar-kachin 7-10 farmland.price.in.myanmar.and.usa 11-14 rice.The Organisation of Rice Export 15-18 rice.singapore.Myanmar to buy Myanmar Rice 19-21 beans.2010 Myanmar Products Chick Pe 22-30 agriculture.fao.data.2012 31-41 tax.Poverty of World Countries & Myanmar 42-46 Cashew.Nut.in.Vietnam.and.world 47-58 Copy Right 2013-14 Milk.Agruculture.Rice.Rural-Development Myanmar
3/16/2014 ◌နွ◌ား◌န◌ိ့◌န◌ှင်◌့အရက် http://mingalaronline.biz/stories/milk.factory.myanmar.htm 1/6 နွားနို့နှင့်အရက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၄ နှစ်သစ်မိန့်ခွန်းတွင် နွားနို့သောက် ကြပါရန်။ အရက် ကို မသောက် ကြရန် ပြောသွားသောအခါ တစ်နိုင်ငံလုံး အသံဖလံများ ဆူညံသွားလေတောသည် ။ ကာတွန်းများ၊ သရော် စာများဖြင့် သရော် စာကိုဖတ် မိသောအခါ ကျွ န်တော် လည်းအနည်းငယ် ရေးလိုပါသည် ။ တကယ် တော့ အချိုရည် ၊ ဘီယာ၊ အရက် စက် ရုံများလောက် အမြတ် အစွန်းမြောက် များစွာ မရသော် လည်းနွားနို့လုပ်ငန်းသည် ကုသိုလ် လဲရ၊ ဝမ်းလည်းဝသော သမ္မာအာဇီဝ လုပ်ငန်းဖြစ်သည် ။ သမ္မတကြီးက အားပေးခြင်းသည် အလွန်ကောင်းသည် ။ သို့သော် ထိုလုပ်ငန်းလုပ်သူများ ယိုင်လဲနေခြင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက ဘာမှမတတ် နိုင်။ အရက် ဘီယာနှင့်အချိုရည် များကိုသာ စွဲစွဲလမ်းလမ်း သောက် သုံးနေကြသော ကမ္ဘာလောကသားများ ဖြစ်ပေသည် ။ ကျွ န်ုပ်ငယ် စဉ်က ၁၉၈၅ခုလောက် တွင် ပျဉ်းမပင်နို့ချက် စက် ရုံတွင် တိမွေးကုသူငယ် ချင်းများနှင့် အတူ နွားနို့တနိုင်မွေးမြူသူများထံမှအစိုးရက နွားနို့ဝယ် ယူသည့် လုပ်ငန်းများ၊ နို့ဆီချက် လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို လေ့ လာခဲ့ဖူးပါသည် ။ အဆင့်နို မ့်နည်းပညာ စက် ရုံဖြစ်သော် လည်းယခုအခါ၊ နိုင်ငံတိုင်းတွင် နွားနို့၊ နို့ဆီ၊ နို့မှုန့်လုပ်ငန်းများကိုအထူးစက် မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် သတ် မှတ် ထားသည် ။ တရုပ်ပြည် မှထုတ် လုပ်သော နို့မှုန့်များကြောင့် ကလေးများစွာ ဝမ်းလျော၊ သေကျေ ကြသော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ပိုမိုစည်းကမ်းတင်းကြပ်ပါသည် ။ ၂၀၁၁ ဗီယက် နမ်နိုင်ငံ VINAMILK နွားနို့၊ နို့မှုန့်စက် ရုံများကို တည် ဆောက် ခဲ့ဖူးသောကြောင့် နွားနို့လုပ်ငန်းသည် ကုသိုလ် လဲရ၊ ဝမ်းလည်းဝ၊ အမြတ် အစွန်းလည်း1 / 58
3/16/2014 ◌နွ◌ား◌န◌ိ့◌န◌ှင်◌့အရက် http://mingalaronline.biz/stories/milk.factory.myanmar.htm 2/6 ကောင်းသောလုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသိပါသည် ။ သို့သော် လူတွေ ဘာကြောင့် အရက် ကိုသောက် ပြီး၊ အရက် ဆိုင်များက စီးပွားပိုကောင်းသနည်း..ဆိုသည့် မေးခွန်းအဖြေမှာ ..အရသာရှိသောကြောင့်.. ဖြစ်ပါသည် ။ မူးရစ်ဆေးဝါးဖြစ်သောကြောင့် ထိုအရသာသည် စွဲလမ်းစေပါသည် ။ နွားနို့စွဲလမ်းနေသူကိုမတွေ့ဖူးပါ။ တနေ့မသောက် ရလဲ ကိစ္စမရှိပါ။၊ ကျွ န်ုပ်၏ စက် မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းနေဖက် သူငယ် ချင်း စင်ကာပူF&N အချိုရည် ၊ နွားနို့နှင့်ယမကာစက် ရုံကြီး၏ အင်ဂျင်နီယာချုပ် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူကလည်းမြန်မာပြည် နွားနို့ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းတွင်စိတ် ဝင်စားပါသည် ။ ယခင်အပတ် 7Day ဂျာနယ် တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကြက် ကြော် ရောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနှင့်အင်တာဗျူးသတင်းရေးထားသည် ။ ထိုသူပင် မြန်မာပြည် ပြန်လာရန် မဖြစ်နိုင်သဖြင့် ပညာတတ် များအတွက် ခက် ခဲမည် ဟုရေးထားသော် လည်းပညာတတ် လူငယ် များ ပြန်လာနေကြသည် ကိုတွေ့ရသည် ။ အသေးစားနှင့်အလတ် စား လုပ်ငန်းများကိုလက် ဝါးအုပ်မှု ပပျောက် စေရန်၊ Import/Export လက် ဝါးအုပ်စီပွားစနစ်များကိုဖြေလျှော့ ပေးရမည် ဖြစ်သည် ။ တစ်နေ့တွင် မန္တလေးရှိMyanmar Diary Industry Ltd နွားနို့၊ နို့ဆီ၊ နို့မှုန့် စက် ရုံသို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ခေတ္တခဏ၊ ၁၅မိနစ်ခန့် လေ့ လာရန် ရောက် လာပါသည် ။ အစီအစဉ်မရှိသော် လည်းမန္တလေးမြို့တွင် အနောက် နိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ် နည်းပညာများဖြင့် မြန်မာပညာရှင်များ တည် ဆောက် ထားသော စက် ရုံဖြစ်သောကြောင့်၊ စိတ် ဝင်စားရခြင်းဖြစ်သည် ။ သမ္မတကြီးက တော် တော် သဘောကျ သွားသည် ။ စိတ် ဝင်စားစွာဖြင့် ၂နာရီကြာအောင် လေ့ လာ၊ မေးမြန်းသွားသဖြင့် ရန်ကုန်ပြန်မည့် သမ္မတကြီးလေယာဉ်ပင် စောင့်ဆိုင်း နေရသည် ။ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးများ ၁၀ဦးကျော် အတူပါလာပြီး၊ ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်အပါအဝင် စိတ် ဝင်စားစွာ မေးမြန်းလေ့ လာသွားသည် ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးသည် ကလေးသူငယ် များ အဟာရဖြစ်ရေးအတွက် ၊ အနာဂါတ် မြန်မာ့ မျိုးဆက် များကိုအထူးအားပေးသည် ။ ထို့ကြောင့် ငယ် စဉ်ကတည်းက နွားနို့သောက် ပေးခြင်းဖြင့်၊ ကျ န်းမာသန်စွမ်းသော လူငယ် များဖြင့် နိုင်ငံတိုးတက် မည် ဟူသော အမြင်ကို အထူးနှစ်ခြိုက် ၊ အကောင်ထည် ဖေါ်လိုသည် ။ ဟုတ် ပါသည် ။ ငယ် စဉ်က နွားနို့သောက် သုံးရသော ကလေးသည် အရွယ် ရောက် လာသောအခါ အခြားသူများထက် သန်စွမ်းမှုအရာတစ်ပန်းသာနေပါသည် ။ ကိုယ် ခန္တာနှင့်စိတ် ဓါတ် အင်အား ပိုသန်စွမ်းကြောင်း ဆေးပညာကဆိုသည် ။ ကျွ န်ုပ်ငယ် စဉ်က မိခင်ဖြစ်သူ မိခင်ကလေးစောင့်ရှောက် ရေးမှာ သူနာပြု၊သားဖွားဆရာမဖြစ်သည် ။ မိခင်တို့ ဌာနက ယူနက် စကိုမှာ နို့မှုန့်များစွာကိုမုံရွာမြို့ ကျောင်းများစွာသို့ အပတ် စဉ်ပို့ပေးက၊ ကလေးများကိုဖျော် တိုက် သည် ။ ဝေငှသည် ။ ကျွ န်တော် တို့မိသားစုမှာ ထုံးစံအတိုင်း ယူနက် စကိုနို့မှုန့်ကိုအမြဲသောက် ရသည် ။ ဈေးထံမှနိုင်ငံခြားဖြစ် နှို့မှုန်က ပိုမိုမွှေးကြိုင်၊ ချိုဆိပ်သော် လည်းမဝယ် စားနိုင်ပါ။ ယူနက် စကိုနှို့မှုန့်ကိုထမင်းနှင့်နယ် ပြီးစား၊ ဖျော် သောက် ခဲ့ရသောကြောင့် ကျွ န်တော် တို့ မောင်နှမများသည် ပိုမိုကျ န်းမာကြခဲ့ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ယူနက် စကိုကဲ့ သို့ ကလေးများဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျောင်းများထိနွားနို့ဖျော် တိုက် ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည် ။ သမ္မတကြီးက ခေတ္တလာရောက် သော နွားနို့စက် ရုံကြီးသည် ၊ ၁၉၉၄ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပြီး အောက် ပါ နွားနို့ထုတ် ကုန်များကိုထုတ် လုပ်ခဲ့သည် ။ SWEETEN CONDENSED MILK - 2000 CARTOONS PER DAY (FROM 100% FRESH MILK) - 2500 CARTOONS PER DAY (FROM SMP COMBINED PROCESS)2/ 58
3/16/2014 ◌နွ◌ား◌န◌ိ့◌န◌ှင်◌့အရက် http://mingalaronline.biz/stories/milk.factory.myanmar.htm 3/6 COMBINED EVAPORATED MILK - 700 CARTOONS PER DAY (RETORT STERILIZATION PROCESS) - 1200 CARTOONS PER DAY (UHT STERILIZATION PROCESS) UHT/PASTUERIZED MILK & FLAVOURED MILK ICE CREAM MILK POWDERS - 1500 KG PER DAY (MEANT FOR DEDICATED POWDER) - 8000 KG PER DAY (GENERAL PURPOSE PLANT) BUTTER FAT , 1000 KG PER DAY အဆိုပါစက် ရုံသည် စီးပွားရေးအောင်မြင်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည် တွင်းထုတ် ၊ အရည် အသွေးမြင့် နွားနို့စက် ရုံဖြစ်လာသည် ။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည် တော် များတွင် စက် ရုံ(၃)ခုဖြင့် လည် ပတ် ၊ ကုန်ထုတ် လုပ်နိုင်ခဲ့သည် ။ သို့သော် ၂၀၁၁ မြန်မာအစိုးရသစ် တက် လာပြီးသည့် နောက် ပိုင်း၊ အသေးစား၊ အလတ် စား စက် ရုံများ ကုန်ထုတ် လုပ်စရိတ် မတတ် နိုင်ခြင်း၊ ပြည် ပမှဝင်ရောက် လာသော နွားနို့ထွက် ကုန်များကိုလုံးဝမယှဉ်နိုင်ခြင်းကြောင့် စီးပွားပျက် ခဲ့ရသည် ။ စက် ရုံအချို့ကို လုပ်ငန်းလျှော့ ချလိုက် ရသည် ။ သမ္မတကြီးကလည်းနွားနို့လုပ်ငန်း၊ ဒိန်ခဲ၊ နို့မှုန့် စသည် တို့တွင် နာမည် ကြီးသော ဒိန်းမတ် ၊ ဆွီဒင်၊ နော် ဝေး နိုင်ငံများမှကုမ္ပဏီများ၊ နယူးဇီလန်၊ သြစတြေးလျှားတို့မှလာရောက် ရင်းနှီးမြှတ် နှံ နွားနို့လုပ်ငန်း ထုတ် လုပ်ဖို့ ဖိတ် ခေါ်သောကြောင့် ကုမ္ပဏီးကြီးများ လာရောက် အခြေအနေကြည့် ပြီး ပြန်သွားကြသည် ။ မလုပ်နိုင်သေးပါ။ ပြည် တွင်း နွားနို့၊ နို့ချက် စက် ရုံလေးများကိုအားကိုးရုံသာရှိသည် ။ သမ္မတကြီးစိတ် ဝင်စားသော မြန်မာ့ အနာဂတ် လူသားအရင်းမြစ် ကျ န်းမာကြံ့ ခိုင်ရေး စီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့် အားလုံးက စိတ် ဝင်စားစွာ လေ့ လာကြသည် ။ နောက် ပိုင်း Follow up နောက် ဆက် တွဲ တာဝန်ပေးချက် များဖြင့် ဝန်ကြီးများက အဖွဲ့များဖြင့်၊ ထိုကဲ့ သို့ စက် ရုံများ မြန်မာပြည် တွင် ရေရှည် ပြည် တွင်းနည်းပညာဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ စက် ရုံသို့ လာရောက် ၊ နည်းနာခံယူကြသည် ။ ဝန်ကြီးများ သိလိုသည် များကိုလုပ်ပေး၊ ဆောင်ရွက် ပေးရသည် မှာ စရိတ် ထောင်းသည် ။ အစိုးရက ထောက် ပံ့ငွေ၊ ဈေးကွက် များကိုမရပဲ၊ အစိုးရဝန်ကြီးများ နာလည် ချင်ဇောနှင့် လေ့ လာမှုမှာ အားရစရာကောင်းလှသည် ။ လအနည်းငယ် ကြာသွားသောအခါ ဝန်ကြီးများ မလာနိုင်တော့ ။ ထုံးစံအတိုင်း အေးသွားသည် ။ စက် ရုံမှာလည်းနိုင်ငံခြားမှဝင်လာသော ဒိန်းမတ် ၊ နယူးဇီလန်၊ သြစတြေးလျှားမှဝင်လာသည့် အခွန်မဲ့၊ နွားနို့၊ နို့ဆီ၊ နို့မှုန့်များကိုဘယ် လိုမှမယှဉ်နိုင်ပါ။ များများလည် ပတ် လျှ င် များများရှုံးမည် ဖြစ်သောကြောင့် အသက် ငင်ပြီး၊ လည် တယ် ဆိုရုံလောက် သာ လည် ပတ် နိုင်တော့ သည် ။ မြန်မာအစိုးရ ပြည် တွင်းကုန်ထုတ် မှုအားပေးသော သွင်းကုန်အခွန်စနစ် မှန်ကန်စွာကျ င့်သုံးလာနေသောကြောင့် မကြာမီစီးပွားကောင်းလာတော့ မည် ဖြစ်သည် ။ စက် ရုံလည် ပတ် ရာတွင် နွားနို့ကုန်ကြမ်းတစ်ခုတည်းအရင်းနှီးမဟုတ် ပါ။ ပစ္စည်းရောင်းရဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးပါသည် ။ ပြည် တွင်းပညာရှင်များနှင့် တပ်ဆင်ထားသော စက် ရုံဆိုသော် လည်3း / 58
3/16/2014 ◌နွ◌ား◌န◌ိ့◌န◌ှင်◌့အရက် http://mingalaronline.biz/stories/milk.factory.myanmar.htm 4/6 နွားနို့စက် ရုံအတွက် သံမဏီထည် များ၊ စက် ပစ္စည်းများ၊ လျှ ပ်စစ်မိုတာ၊ UHT, Pasteurize, Condense, Packing, Bottle စက် နှင့်အပိုပစ္စည်းအများစုမှာ နိုင်ငံခြားမှဝယ် ယူတင်သွင်းရသည် ။ အရေးကြီးဆုံး ဝယ် လိုအား ပြည် တွင်းစားသုံးသူများ မဝယ် တော့ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ပြည် တွင်းစားသုံးသူများကလည်းဒိန်းမတ် ၊ နယူးဇီလန်မှာ နွားနို့၊ နို့ဆီ၊ နို့မှုန့်များက ပိုပြီးဈေးချိုသောအခါ ပြည် တွင်းဖြစ်ကို အားပေးချင်သော် လည်းပြည် တွင်းဖြစ်ကိုဘိုင်ဘိုင် လုပ်လိုက် ရသည် ။ နို့မှုန့်သည် နိုင်ငံခြားအရက် ၊ ဆေးလိပ်ကဲ့ သို့ ကန့်သတ် သတ် ကုန်ဖြစ်သည် ။ တင်သွင်းရန် လိုင်စင်လိုသည် ။ သို့သော် မြန်မာပြည် ကျေးရွာအနှံ့ကုန်စုံဆိုင်များတွင် နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက် ၊ ဆေးလိပ်များကိုတွေ့နိုင်သော် လည်း၊ ပုပ်သိုးသွားနိုင်သော နွားနို့စက္ကူပါကင်ဗူး အကြီးအငယ် များ၊ နို့ဆီ၊ နို့မှုန့်များ နေရာတကာ ရောက် နေခြင်းမှာ၊ ပြည် တွင်းနွားနို့ကုန်ထုတ် ၊ စက် မှုလုပ်ငန်းကိုရိုက် ချိုးလိုက် ခြင်းဖြစ်သည် ။ ကုန်ကျ စရိတ် များတွင် နိုင်ငံခြားမှကုန်ကြမ်းဓါတုပစ္စည်းများ၊ စက် အပိုပစ္စည်းများ ဈေးကြီးလာခြင်း၊ လျှ ပ်စစ်နှင့်လောင်စာဆီများ ဈေးကြီခြင်းတို့ကိုကြံ့ ကြံ့ ခံနိုင်သော် လည်း၊ အခွန်မဲ့နီးပါး ဝင်ရောက် လာသော နိုင်ငံခြားနွားနို့ထုတ် ကုန်များကိုမယှဉ်နိုင်ခြင်းသည် အဓိကဖြစ်လေတော့ သည် ။ နွားနို့ထုတ် လုပ်မှုအတွက် ဆွေးနွေးမည့်အချ က် များတွင် ၁။ ဘာကြောင့်ဝယ် မသောက် ကြသလဲ ၂။ နွားနို့ကိုလူတွေသောက် ချင်ကြပါသည် ။ ၃။ နွားနို့လုပ်ငန်း ဘာကြောင့်မလုပ်ကြပါသလဲ။ ၄။ နွားနို့ကိုအမျိုးသားထုတ် ကုန်အဖြစ် လုပ်သင့်ပါသလား ဟူသော ကဏ္ဍများဖြင့် စဉ်းစားမိပါသည် ။ ၁။ ဘာကြောင့်နွားနို့ဝယ် မသောက် သနည်း.. မေးခွန်းမှာ မြန်မာများအတွက် ရှင်းနေပါသည် ။ ဈေးမတတ် နိုင်သည့် အပြင်၊ နွားနို့ကြိုက် သူမြန်မာများ နည်းပါးလှသည် ။ ကလေးများကတော့ ကြိုက် ကြသော် လည်းမိဘများက ငွေမတတ် နိုင်ပါ။ ကျွ န်ုပ်ငယ် စဉ်က မိခင်နို့ရည် သောက် သုံးခဲ့သော ကလေးဖြစ်ပြီး၊ ယူနီဆက် မှပေးဝေသော နို့မှုန့်များကိုပုံမှန်ဖျော် သောက် နိုင်ပါသည် ။ ကျွ န်တော် တို့ မူလတန်းဘဝ ၁၉၇၀၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်လောက် က ယူနီဆက် မှနွားနို့များစွာ မူလတန်းကျောင်းများတွင် သောက် သုံးခဲ့ရသည် ။ ယခုအခါ ထိုကဲ့ သို့မရှိတော့ ပါ။ အကျ င့်ပျက် များလာသောကြောင့် ယူနီဆက် ကလဲ မပေးတော့ သလား မသိ။ ၂။ နွားနို့ကိုလူကြီးများမသောက် ကြသော် လည်း၊ မိမိသားသမီးများကိုတိုက် ကျွေးချင်ပါသည် ။ အသက် ၁၀နှစ်ပတ် ဝန်းကျ င် မြန်မာကလေးများကိုမေးကြည့် ပါ။ အားလုံးနွားနို့ကြိုက် ပါသည် ။ မိဘချမ်းသာသော ကလေးများက ချေးများပြီး၊ မသောက် ချင်တာ ချွင်းချက် ဖြစ်သည် ။ နွားနို့သောက် ချင်ရခြင်းမှာ နွားနို့သည်4/ 58
3/16/2014 ◌နွ◌ား◌န◌ိ့◌န◌ှင်◌့အရက် http://mingalaronline.biz/stories/milk.factory.myanmar.htm 5/6 ဈေးကြီးသောကြောင့်၊ လူတိုင်းမသောက် နိုင်ပါ။ နွားနို့သည် လူဆင်းရဲသားများအတွက် မတတ် နိုင်သောအစားအစာ ဖြစ်သောကြောင့်၊ ကလေးများ နွားနို့သောက် ချင်ပါသည် ။ လူကြီးများလည်းနေမကောင်းချိန်၊ နလံထချိန် နွားနို့သောက် သည် ။ ၃။ နွားနို့လုပ်ငန်းကိုလူတွေမလုပ်ကြခြင်းမှာ နွားမွေးမြူခြင်းသည် ရင်းနှီးမှုကြီးပါသည် ။ ကရိကထလည်းများသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ နွားမမွေးပြီး နွားနို့ညစ်ရောင်းခြင်းသည် တောရွာများတွင် စီးပွားရေးမဟုတ် ပဲ၊ လယ် သမားများ၏ ခိုင်းနွားအမများ သားမွေးသောအခါ အပိုဝင်ငွေတစ်ခုဖြစ်လာသည် ။ နို့စားနွားမ မွေးမှ အမြတ် အစွန်းရမည် ဖြစ်သည် ။ ၄။ နွားနို့ကိုအမျိုးသားထုတ် ကုန်အဖြစ် လုပ်သင့်သော် လည်း၊ လယ် ယာလုပ်ငန်းတွင် ဆန်စပါးစိုက် ပျိုးခြင်းကိုပင် အစိုးရက ပံ့ပိုးမပေးနိုင်သေးပါ။ ကျေးရွာများတွင် နွားမွေးနိုင်သူများကိုငွေချေး၊ နွားပေး၊ နို့စားနွားမ နွားနို့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်စေပါက လူတိုင်းလုပ်မည် ဖြစ်သည် ။ ဥပမာ .. နွားနို့စက် ရုံတစ်ခု တည် ဆောက် ပြီးပါက ကုမ္ပဏီသည် အနီးနား၊ ကျေးရွာများတွင် နွားမွေးမြူအောင် ပံ့ပိုး၊ ငွေချေး၊ လုပ်ငန်းမတည် ပေးရတော့ မည် ဖြစ်သည် ။ သို့မှသာ ကုန်ကြမ်း နွားနို့ရရှိမည် ။ နွားမွေးသူများအဖို့လည်းနွားနို့ဝယ် မည့် သူအဆင်သင့်ရှိနေသောကြောင့် ပိုမိအဆင်ပြေမည် ဖြစ်သည် ။ ထိုမျှကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သော် လည်းတနိုင်လုပ်ငန်းလည်းမလုပ်နိုင်၊ စက် ရုံအဖြစ်လဲ မလုပ်နိုင်၊ အရက် နှင့်ဆေးလိပ်လုပ်ငန်းများသာ တစ်နိုင်လုပ်ငန်း၊ စက် ရုံလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေကြပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှတ် နှံမှုကော် မရှင်က လိုင်စင်ချပေးလိုက် သော ပြည် ပရင်းနှီးမြှတ် နှံမှုများတွင် နွားနို့၊ နို့ဆီ စက် ရုံရင်းနှီးမြှတ် နှံမှုရှိမည် မထင်ပါ။ အရက် ၊ဘီယာနှင့်ဆေးလိပ်စက် ရုံမြောက် များစွာ လိုင်စင်ချပေးလိုက် သောကြောင့် ရင်းနှီးမြှတ် နှံကော် မရှင်ကိုပင် အသစ်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက် ရရှာသည် ။ မဟုတ် တာ အတောမသတ် ဆက် ကာ၊ ဆက် ကာလုပ်နေသူများကိုလိုက် တားဆီးနေရခြင်းကလည်းအစိုးရသစ်အတွက် အလုပ်ကြီးတခုဖြစ်နေသည် ။ ထိုသို့ ကျ ယ် ပြန့်လာသည့် ဒီဘိတ် နှင့် ပတ် သက် ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရက် နှင့်ပတ် သက် ၍ ကျ မ်းပြု ပညာရှင်ဖြစ်သူဆရာမူးရစ်ညွန့်(ကောက် ညှင်းမြေ) ဆွေးမြေ့စွာ “လူသားဆန်မှုနဲ့ ကိုယ် ချင်းစာတရားကို ဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော် ဘယ် တော့ မှမရှာဖွေတော့ ဘူး" ဟုပြောကြားခဲ့သည် ။ ကျွ န်တော် က အရက် လည်းမသောက် ရန်၊ နွားနို့သောက် ရန်ကိုထောက် ခံရေးသားပါသည် ။ အားမလျှော့ ပါ။ မိထ္ထီလာ၊ ပျော် ဘွယ် ၊ ပျဉ်းမပင် စသည့် ဒေသများစွာမှမလိုင်မုန့်လုပ်ငန်း၊ ပြည် တွင်းမှလဘက် ရည် ဆိုင်များအတွက် ဒေသချက် နို့ဆီများကတော့ ဆက် လက် ရှင်သန်နေဦးမည် ။ မကြာမီအခွန်ကောက် ခြင်း စနစ်ကောင်းများကြောင့် ပြည် ပမှပြည် တွင်းအရည် သွေးကိုမမှီသော နွားနို့ထုတ် ကုန်များ တင်သွင်းမှုရပ်သွားမည် ။ လယ် ယာထွက် ကုန်စက် မှုလုပ်ငန်း စက် ပစ္စည်းများ အခွန်မဲ့၊ လွယ် ကူစွာတင်သွင်းခွင့်ရလာမည့် နေ့သည် သိပ်မဝေးတော့ ပါ။ ပြည် တွင်လယ် ယာ ကုန်ချော၊ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာ ပေါ်လာတော့ မည် ဟုမျှော် လင့်နေပါသည် ။ လက် ရှိအခြေအနေတွင် အသက် ငင်နေသော ပုဂ္ဂလိကစက် ရုံအသေး၊ အလတ် များစွာ ခက် ခဲစွာ5/ 58
3/16/2014 ◌နွ◌ား◌န◌ိ့◌န◌ှင်◌့အရက် http://mingalaronline.biz/stories/milk.factory.myanmar.htm 6/6 ဆက် လက် လည် ပတ် နေပါဦးမည် ။ လယ် ယာ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများကိုတရုပ်၊ ဗီယက် နမ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံများကဲ့ သို့ ဗဟိုအစိုးရ၊ ပြည် နယ် အစိုးရများက ထောက် ပံ့ငွေပေးရန် မျှော် လင့်နေဆဲ ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာအနာဂါတ် ကလေးများအဟာရ ဖြည့် ဆည်းလိုပါက။ အလှုရှင်များ ကိုယ် တိုင် နို့မှုန်ဖျော် ပြီး ကျောင်းများရှိကလေးသူငယ် များကိုအလှုဒါန၊ တိုက် ကျွေးခြင်းသည် ခေတ် စားနေပါသည် ။ လက် ရှိအချိန်တွင် မြန်မာ့ အစိုးရကလည်းစာသင်ကျောင်းများကိုယူနက် စကိုမှနွားနို့များ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ (အခမဲ့ဖြစ်စေ) ကြိုးစားရယူပြီး၊ ဆရာမများကိုယ် တိုင် ဖျော် တိုက် ကျွေးခြင်းနည်းလမ်းသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတော့ သည် ။ ဇော် အောင်6/ 58
3/16/2014 Eindra Store http://mingalaronline.biz/stories/milak.and.alcohol.2.htm 1/4 နွားနို့နှင့်အရက် (အမှတ် ၂) WAGYU အပိုင်း(၁)တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံကလေးငယ် များ နွားနို့သောက် ၊ အဟာရပြည့် ဝစေပြီး အနာဂါတ် မြန်မာများ သန်မာထွားကျိုင်းစေလိုသည် စေတနာဖြင့်ကြိုးစားချက် များကို ရေးသားခဲ့ပါသည် ။ ခါချဉ်ကောင်ကြီး ခါးကမသန်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားမှနွားနို့၊ နို့ထွက် ပစ္စည်းနှင့် နို့မှုန့်များ အခွန်မဲ့ ဒလဟော သွင်းလာသောကြောင့် ပြည် တွင်းနွားနို့ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း ပျက် စီးသွားကြောင်း၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းကိုSME small & medium enterprise များလုပ်ရမည့် အစား ခရိုနီနှင့် ဦးပိုင်၊ အစိုးရလုပ်ငန်းများကသာ အခွန်မဲ့၊ ကုန်သေတ္တာမြောက် များစွာ အလွယ် တကူသွင်း၊ ထုတ် နိုင်သဖြင့် တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းကိုဦးစားပေးသည့် နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာ မလိုင်မုန့်လုပ်ငန်းလောက် သာ လုပ်နိုင်ကြောင်း လက် ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကို ဖေါ်ပြခဲ့သည် ။ ရင်းနှီးမြှတ် နှံမှုအခက် ခဲကြောင့် ၁၅နှစ် လည် ပတ် အောင်မြင်ခဲ့သော ပြည် တွင်းနွားနို့၊ နို့မှုန့်စက် ရုံကြီးပင် လုပ်ငန်းမရပ်အောင် အပြင်းထန်ကြိုးစားနေရသည် ။ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိနွားနို့စက် ရုံတစ်ခု Malaysia Diary Farm စက် ရုံတစ်ခုသို့ သွားရောက် လေ့ လာခဲ့သည် ။ သြစတြေးလျှားမှ100kg နို့မှုန့်ထုပ်များကိုဝယ် ယူပြီး၊ စင်ကာပူတွင် 25kg အထုပ်ကလေးများ ပြန်ခွဲထုတ် ကာ၊ export ပြည် ပသို့ စင်ကာပူကုန်တံဆိပ်ကပ်က ပြန်ရောင်းချသည် ။ မူလသြစတြေးလျှား ဘိလပ်မြေအိတ် ကဲ့ သို့သော အိပ်များမှတံဆိပ်ကိုခွာ၊ စင်ကာပူမှDiary Milk, Manufactured in Singapore တံဆိပ်ကပ်ထားသော စက္ကူပုံးများထဲသို့ ပြောင်းပြီး ထုတ် ပိုး၊ ပြည် ပသို့တင်ပို့ရောင်းချသည် ။ စင်ကာပူဆိုလျှ င် ဝယ် သူများက ပိုပြီး ယုံကြည် စိတ် ချသောကြောင့် သြစတြေးလျှားမှတင်သွင်းလာသော နို့မှုန့်အထုတ် ကြီးများ၏ ၅၀% ကိုပြည် ပသို့ ပြန်ပို့သည် ။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်းရှိအချို့နို့မှုန့်သုံးသည် မုန့်လုပ်ငန်းများကိုနွားနို့အမှုန့်ထုတ် များ ရောင်းချသည် ။ အများစုသော နို့မှုန့်များကိုစက် ရုံတွင်ဖျော် ပြီး နွားနို့ပြန်ထုတ် သည် ။ HL တံဆိပ်ဖြင့် နွားနို့များကိုယခင်က နွားနို့လပ်လပ်ဆတ် ဆတ် သုံးပြီး ထုတ် ထားသည် ဟုထင်ခဲ့သည် ။ စက် ရုံရောက် မှပဲ သြော် ..လက် စသတ် တော့ သြစတြေးလျားက နို့မှုန့်တွေကို ဖျော် ပြီး အမွှေး၊ အနံ့လပ်ဆတ် အောင် ထုတ် လုပ်ရောင်းချမှန်းသိလိုက် ရသည် ။ နောက် ဆိုလျှ င် HL နွားနို့ကိုမသောက် တော့ ဟုဆုံးဖြတ် လိုက် သည် ။ ထိုစက် ရုံမှပင် ကလေးများအလွန်သောက် သော Vitagen (less sugar) များကိုထုတ် လုပ်နေပြီး၊ HL, Vitagen ထရပ်ကားပေါင်း တစ်ရာခန့် စက် ရုံပတ် ပတ် လည် တွင် ရပ်ပြီး၊ ကုန်လာထုတ် နေသည် ကို တွေ့ရသည် ။ နို့နှင့်ပတ် သက် သော ဖျော် ရည် များကိုထုတ် လုပ်၊ စီးပွားဖြစ်နေသော ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီး ၂၄နာရီအဆက် မပြတ် လည် ပတ် နေသည် ကိုတွေ့ရသည် ။ နောက် တစ်ခုမှF&N ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည် ။ ထိုင်းနိုင်ငံဘီယာကုမ္ပဏီကြီးက စင်ကာပူဖျော် ရည် နှင့်ဘီယာလုပ်ငန်းကြီး F&N ကိုဝယ် လိုက် ပြီဟုသိရသည် ။ F&N သည် ဘီလျှံဒေါ်လာ ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်ပြီး၊ တိုက် ဂါးဘီယာနှင့် အခြားဘီယာ၊ ကိုကာကိုလာ၊ ပက် စိကိုလာ စသည့် နာမည် ကြီးဖျော် ရည် များကိုထုတ် လုပ်ပေးသောကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည် ။ Pandan , Singapore တွင်ရှိသော စက် ရုံတွင် သူငယ် ချင်းမြန်မာ အင်ဂျင်နီယာချုပ် အလုပ်လုပ်သောကြောင့် သွားရောက် လေ့ လာရာ၊ အချိုရည် များ ထုတ် ပိုးသော စက် ရုံဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံခြားမှလိမ္မော် ၊ ပန်းသီး စသည့် သစ်သီးဖျော် ရည် များကိုဗူးသွတ် ၊ ပုလင်းသွန် လုပ်ငန်း၊ နွားနို့များကိုကွန်တိန်နာတိုင်ကီများဖြင့် သြစတြေးလျာမှစင်ကာပူတို့တင်ပို့ပြီး၊ ထိုနွားနို့များကိုပုလင်းသွင်း၊ ဗူးသွင်း ပြန်လုပ်သည့် စက် ရုံဖြစ်သည် ။ F&N မှထုတ် လုပ်သော နွားနို့များသည် အမှန်အကန်နွားနို့် ဖြစ်သည် ။ စင်ကာပူ၊ မလေးရှားတွင် နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှနွားနို့များကိုညှစ်ပြီး၊ ဗူးသွင်းရောင်းသည် Organic Milk များလည်းရှိသည် ။ ထိုနေရာများတွင် နို့စားနွားမကြီးများကိုမွေးမြူပြီး၊ နွားနို့ညစ်ရောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယခုရေးလိုသည် ။ အသားနှင့်နို့ အကောင်းဆုံးထွက် သော နွားအမျိုးတစ်ခုမှာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဂျင်နတစ်ပညာဖြင့် ထုတ် လုပ်သော WAGYU ဝါဂူး ဟုခေါ်သော ဂျပန်နွားအကြောင်း အနည်းငယ် ရေးပါမည် ။7/ 58
3/16/2014 Eindra Store http://mingalaronline.biz/stories/milak.and.alcohol.2.htm 2/4 WAGYU ဝါဂူး ဟုခေါ်သော ဂျပန်နွား ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဂျင်နေးတစ်ပညာဖြင့် မျိုးစပ်ပြီး သန္ဓေသား Embryos အဖြစ်၎င်း၊ သုတ် ပိုး Seaman အဖြစ်၎င်း ရောင်းချသည် ။ သန္ဓေသားတစ်ခုကိုဒေါ်လာ၆၅၀ဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ရောင်းချသည် ။ အမျိုးပေါင်းများစွာရှိသောကြောင့် နွားအမျိုးအစားပေါ်မူတည် ပြီး သန္ဓေသား တန်ဖိုးခြားနားမှုရှိမည် ။ ထိုနည်းပညာကိုဂျပန်များက သူတို့နိုင်ငံတွင်း သိမ်းဆည်းထားသည် ။ ဂျပန်များက မျိုးရိုးဗေဒ ပညာတွင် စီးပွားဖြစ်ထုတ် လုပ်သော ပုလဲမုတ် ကောင်များ၊ ငါးပုဇွန်မွေးမြူခြင်း၊ ကြက် ၊ဝက် ၊ ဆိတ် ၊နွား စသည့် စားသောက် ကုန်တိရိစ္ဆာန်များကိုစီးပွားကိုက် အောင်၊ အရည် သွေးမြင့်မားသော သားငါးများထုတ် လုပ်သည့် နည်းပညာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည် ။ ယခုနို့စား၊ အသားစား နွားပေါင်းများစွာအနက် ဝါဂူး ဟုခေါ်သော အသားစားနွားအကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးမြူပါက ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှိသဖြင့် စိတ် ဝင်စားသူများအတွက် အကြမ်းဖျင်း ရေးလိုက် ပါသည် ။ နွားအသားနှင့်နို့ထုတ် လုပ်ခြင်းသည် ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြတြေးလျှား တို့တွင် စီးပွားဖြစ်ထုတ် လုပ်ကြသည် ။ ကမ္ဘာအမဲသား အထုတ် လုပ်ဆုံးနိုင်ငံသည် အမဲသားသည် နိုင်ငံခြားတွင် ဈေးအကြီးဆုံး အသားတစ်ခုဖြစ်သည် ။ ကြက် သားသည် ဈေးအချိုဆုံးဖြစ်သည် ။ ငါးပုဇွန်များသည် ဈေးအလွန်ကြီးသလို၊ ဈေးချိုသော ရေငံငါးပုဇွန်များလည်းရှိသည် ။ နိုင်ငံခြားတွင် အမဲသားဈေးနှုန်းသည် ကြက် သားဈေးထက် အနည်းဆုံး ၂ဆမျှ ဈေးကြီးသည် ။ ယခုရေးသားသည့် ဝါဂူး ဆိုသည့် အမဲသားမျိုးသည် စင်ကာပူNTUC ကုန်တိုက် တွင်ပင် ရောင်းခဲသည် ။ သာမန်စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ ဈေးကြီးသဖြင့် မစားကြပါ။ အလွန်နူးညံ့ အရသာရှိသော အမဲသားဖြစ်သည် ။ ထိုသို့ အရသာရှိပြီး၊ ကျ န်းမာရေးနှင့်ညီညွတ် အောင် အထူးမွေးမြူရသည် ။ နွားတစ်ကောင် မျိုးစေ့ပင်လျှ င် ဒေါ်လာ ၆၅၀ ဈေးရှိသည် ။ ထိုမျိုးစေ့ကိုနွားမတစ်ကောင် သားအိမ်တွင့် ထည့် ပေးရသည် ။ အကောင်ကြီးသဖြင့် မြန်မာ သာမန်နွားမသားအိမ်တွင် ထည့် ပါက၊ ရိုးရိုးမွေးနိုင်မည် မဟုတ် ၊ ဗိုက် ခွဲမွေးရမည် ဖြစ်သောကြောင့် အရွယ် အစား ကြီးမားသော မြန်မာနွားမအမျိုးတွင် သားန္ဓေမျိုးစေ့တည့် ရမည် ။ အမဲသား (နွားသား) ကမ္ဘာ့ ပေါ်တွင် အများဆုံး၊ မွေးမြူထုတ် လုပ်သော နိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ဖြစ်သည် ။ ဘရားဇီး၊ တရုပ်၊ အာဂျင်တီးနား၊ သြစကြေးလျားတို့ အဆင့်ဆင့်ရှိသည် ။ Production (%) U.S. 18.7% Brazil 12.9% China 11.6% Argentina 5.0% Australia 3.6% Russia 3.2% Others 45.1% .. etc. မြန်မာနိုင်ငံတွင် နွားကို သတ် စားရန်မွေးမြူခြင်းမရှိ၊ လယ် ထွန်ရန်မွေးရင်း သဘာဝအတိုင်း နွားငယ် လေးများ နှစ်စဉ် တစ်ကောင်စီမွေးဖွားလာသည် ။ နွားတစ်ကောင်၏ ပျမ်းမျှအသက် မှ၁၅နှစ်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်သားဆိုလျှ င် လယ် ထွန်ခိုင်းလို့ရပြီဖြစ်သည် ။ သားစပ်ရန်လည် ရပြီဖြစ်သည် ။ နို့စားနွားမများမှာ နို့ထွက် သီးသန့် မွေးမြူရပြီး သာမန်နွားထက် ပိုပြီးဈေးကြီးသည် ။ နို့ထွက် ကောင်းရန် အစာကိုစနစ်တကျ ကြွေးရသည် ။ သာမန်အားဖြင့် အသားစား နွားများသည် ၂၄လ (၂နှစ်) အကြာတွင် ရောင်းချ၊ ဝင်ငွေ စတင်ရရှိနိုင်သည် ။ နို့စားနွားမလည်း၁နှစ်ကျော် တွင် နွားနို့စတင်ရရှိသည် ။ အသား၊ နို့ အကောင်းဆုံး၊ အထွက် ဆုံး ဖြစ်ရန် နည်းပညာများဖြင့် ကြွေးမွေး၊ ထိန်းသိမ်းရပေသည် ။ ဝါဂူး နွားများသည် အအေးပိုင်း ရာသီဥတုကိုကြိုက် နှစ်သက် သောကြောင့် ကချင်ပြည် ၊ တောင်တန်း၊ ရှမ်းကုန်းမြေမြင့်များတွင် မွေးမြူရန် သင့်လျှော် သည် ။ ကချင်ပြည် နယ် တွင် မွေးမြူနိုင်ပါက ယခုအခါ ထိုင်းနိုင်ငံသားများနီးပါ ဝင်ငွေကောင်းလာသော ယူနန်၊ တရုပ်လူမျိုးများကိုအမဲသားရောင်းချနိုင်မည် ဖြစ်သည် ။ နွားမွေးမြူရေးသည် လူအင်အားမလိုသော် လည်း၊ နွားများပြားစွာ မွေးလာပါက၊ ရင်းနှီးမှုကြီးသော သားသတ် စက် ရုံများ ကချင်ပြည် နယ် တွင် တည် ဆောက် လာမည် ဖြစ်သည် ။ ထိုအခါ ပြည် နယ် သားများ အလုပ်ကိုင်ရရှိလာမည် ၊ ဝင်ငွေလည်းတိုးလာပြီး ပြည် နယ် တွင် မူရစ်၊ ဘိန်းများ စိုက် ပျိုးနေခြင်းမှပိုမိုဝင်ငွေကောင်းသော သားသတ် စက် ရုံအလုပ်သမားများ ဖြစ်လာမည် ။ နို့စားနွားမ မွေးမြူရေး ဝါဂူးနွားများအတွက် မြန်မာပြည် တွင် ပြောင်းကိုကြွေးမွေးပါက အစာဖိုး အလွန်သက် သာမည် ဖြစ်သည် ။ မြန်မာနွားမျိုးကောင်းများနှင့် မျိုးစပ်ပြီး ၅ဆက် မျှ ကြာလျှ င် မြန်မာပြည် ရာသီဥတုနှင့် ရောဂါများကိုခံနိုင်သော နွားမျိုးများရနိုင်ပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ တိမွေးကုတက္ကသိုလ် မှ တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူပညာရှင်များ လေ့ လာရန်လိုသည် ။ လောလောဆယ် တွင် မြန်မာနိုင်ငံအလယ် ပိုင်းတွင် နို့စားနွားမများစွာ နွားနို့အတွက် သီးသန့်မွေးမြူကြသည် ။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် တစ်ကောင်၊ ၂ကောင် မွေးထားပါက နေ့စဉ်နွားနို့ညစ်ရောင်းသည့် ဝင်ငွေရသဖြင့် အလွန်စီးပွားတွက် သားကိုက် သည် ။ နွားမ ဈေးနှုန်းမှာ အလွန်ဈေးကြီးသည် ။ နို့အထွက် ကောင်းနွားမသည် သိန်း၅၀အထက် တွင် ရှိနိုင်သည် ။ သာမန် ခိုင်းနွားသည် ၁၀သိန်း၊ ၁၅သိန်းမျှသာရှိသော် လည်းနို့စားနွားမသည် အလွန်ဈေးကြီးသည် ။ နို့စားနွားမ အကောင်း ရာချီပြီး မွေးရလောက် အောင် မြန်မာပြည် တွင် နွားနို့စက် ရုံ၊ နို့ဆီ၊ နို့မှုန့်စက် ရုံမရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အမြောက် အမြား စီးပွားဖြစ် မထုတ် နိုင်သော် လည်းတနိုင်တပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလွန်ကောင်းသည် ။ နိုင်ငံတော် မှလယ် ယာစိုက် ပျိုးရေး၊ လယ် သမားများအား ငွေစိုက် ပေးပြီး နို့စားနွားမ လုပ်ငန်းထူထောင်ပေးနိုင်ပါက နိုင်ငံဆင်းရဲမွဲတေမှုမှလျှ င်မြန်စွာ 8 / 58
3/16/2014 Eindra Store http://mingalaronline.biz/stories/milak.and.alcohol.2.htm 3/4 လွတ် လာနိုင်ပါသည် ။ နွားနို့ ကမ္ဘာ့ ပေါက် ဈေးမှာ တစ်ဂါလန် အမေရိကန် ၈ဒေါ်လာ ပျှမ်းမျှဈေးပေါက် သည် ။ ဘီယာ၊ အရက် ဈေးထက် ပင် ဈေးကြီးသလိုရှိသည် ။ အမြောက် အများဝယ် လျှ င် တစ်ဂါလန် ၈ဒေါ်လာ (တနည်းအားဖြင့် တစ်ပိသာ ၃ဒေါ်လာ ကျ သင့်ပါက၊ နွားနို့တစ်ခွက် (၃၀၀ ml) ကို50cent (ကျ ပ်၅၀၀ခန့်) ပေးရမည် ။ မဝယ် သောက် နိုင်ပါ။ သာမန်ဆင်းရဲသားများ နွားနို့ဝယ် သောက် ရန် မြန်မာပြည် တွင် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရက အခမဲ့တိုက် ကြွေးပါမှ၊ မူလတန်းကျောင်းများတွင် တိုက် ကြွေးခြင်းဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ။ နွားနို့ရဖို့အတွက် အလွန်ဈေးကြီးသော နို့စားနွားမများ ရင်းနှီးရမည် ။ နွားသည် တော် တန်ရုံနာမကျ န်းဖြစ်ခဲသော် လည်းသိန်း၅၀ခန့်တန်သောကြောင့် သေဆုံး၊ ထိခိုက် မှုရှိပါက နစ်နာလှပါသည် ။ သြစကြေးလျားတွင် AWA သြစတြေးလျား ဝါဂူးအဖွဲ့ ရှိပြီး မွေးမြူလိုသူများအား ငွေချေးပေးသည် ။ နွားမွေးနည်းသင်တန်းပေးပြီး၊ ၈နှစ်အတွင်း အရင်းကျေ သည့် အပြင် လုပ်အားခပါ ရရှိမည် ။ ဒေါ်လာ ၂သိန်းခန့် (ကျ ပ်သိန်း၂၀၀၀) ဖြင့် စတင်ရင်းနှီးကာ နွားအကောင်း ၅၀၊ ၁၀၀ စတင်မွေးမြူနိုင်မည် ။ တစ်နှစ်ကြာလျှ င် နွားနို့ရမည် ။ နွားဈေးကြီးသဖြင့် မမွေးနိုင်သော ဆင်းရဲသား မြန်မာတောင်သူလယ် သမားများအား သိုး၊ ဆိတ် ၊ ကျွဲများကိုမွေးမြူစေခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရစေနိုင်သည် ။ ကမ္ဘာနွားနို့၊ အမဲသား အများဆုံးထွက် သောနိုင်ငံများကိုအောက် ပါဇယားတွင် ကြည့် နိုင်ပါသည် ။ နွားမသတ် ရန် တားမြစ်ခဲ့သော အိန္နိယသည် နွားနို့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအတွက် ဆုံးဖြစ်နေသည် ။ တရုပ်၊ အိန္နိယ၊ ပါကစ္စတန် တို့သည် နို့အများဆုံးထွက် သော သိုးနှင့်ဆိတ် နို့ထွက် နိုင်ငံများတွင် ထိပ်ဆုံး၁၀ခုတွင် ပါဝင်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကျွဲနို့အများဆုံးထွက် သောနိုင်ငံအဖြစ် အဆင့် ၆တွင် တွေ့နိုင်သည် ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာကလေးငယ် များအား နွားနို့မတိုက် နိုင်သော် လည်းကျွဲနို့တိုက် ကျွေးနိုင်သည် ကိုစာရင်းဇယားအရ သိရသည် ။ ကျွဲနို့လည်းဆင်းရဲသား၊ လယ် သမားများအတွက် ဈေးကြီးနေဦးမည် ပင်ဖြစ်သည် ။ နိဂုံး ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှလွတ် မြောက် ရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက် မှာ အလုပ်အကိုင်ဖြစ်သည် ။ တောင်သူလယ် သမား၊ စိုက် ပျိုးရေးသမားများသည် မြန်မာလူဦးရေ၏9/ 58
3/16/2014 Eindra Store http://mingalaronline.biz/stories/milak.and.alcohol.2.htm 4/4 ၇၀% မျှ ဖြစ်နေပြီး အဆင်းရဲဆုံးလူတန်းစားလည်းဖြစ်သည် ။ ထိုလူများကိုစိုက် ပျိုး၊ မွေးမြူရေးအပြင် Process Industry ဟုခေါ်သော ဆေးကြော၊ သန့်စင်၊ ထုတ် ပိုးပြီးမှ လူထုထံရောင်းချသော စက် ရုံငယ် လေးများစွာ လိုအပ်နေသည် ။ သို့မှသာ မြန်မာ လယ် ယာ၊ သားငါး ထွက် ကုန်များ ပြည် ပထုတ် ရောင်းရာတွင် ဈေးပိုရမည် ။ မျက် နှာပန်းလှမည် ဖြစ်သည် ။ နွားနို့ထုတ် လုပ်ရန်အတွက် နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်နိုင်သော် လည်း၊ မြန်မာကလေးများ နွားနို့အဟာရ သောက် နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရသာလျှ င် နိုင်ငံစီမံကိန်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရပါမည် ။ နိုင်ငံခြားမှနွားနို့များကိုဈေးနှုန်းအသင့်တော် ဆုံး ရရှိအောင် ဝယ် ရမည် ။ ကုလသမဂ္ဂအကူညီများလည်းနို့မှုန်များစွာ ရရှိမည် ဖြစ်သည် ။ လောလောဆယ် တွင် နွားနို့ကိုပြည် တွင်းထုတ် လုပ်ရန် ငွေအရင်းနှီးမရှိသေးသော် လည်းနောက် ၃နှစ်အကြာတွင် နိုင်ငံ မက် ကရိုစီးပွားရေးစနစ် အောင်မြင်လာပြီး၊ အစိုးရတွင် အခွန်ဝင်ငွေ များစွာရလာမည် ။ ယခု2% of GDP အခွန်ရနေသော် လည်းအမြတ် စွန်းများသော နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုမ္ပဏီများကိုစနစ်တကျ အခွန်ကောက် နိုင်လာလျှ င် ပတ် ဝန်းကျ င်နိုင်ငံများကဲ့ သို့ 35% of GDP မရလျှ င်ပင်၊ 15% of GDP ရလာပါက မြန်မာနိုင်င တိုးတက် ဖို့ အလားအလာ အလွန်ကောင်းပေသည် ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တိုးတက် ကြီးပွားဖို့ အခွန်ကောက် ခြင်း စနစ်တကျ လုပ်ရန်လိုသကဲ့ သို့ အခွန်ငွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ပိုပြီး အရေးကြီးလှသည် ။ Corruptio Index တိုးတက် လာမှသာ အခွန်ကောက် ခြင်း၊ အခွန်သုံးခြင်းတို့ တရားဥပဒေအတိုင်း အောင်မြင်လာမည် ဖြစ်သည။ နောက် ဆုံး နိဂုံးအနေဖြင့် ဆင်ရဲသော ပြည် သူ့သားသမီးငယ် များ နွားနို့သောက် နိုင်ဖို့၊ အဟာရပြည် ဝသော အနာဂါတ် မြန်မာမျိုးဆက် ဖြစ်လာရေးအတွက် National Plan အဖြစ် လုပ်ဆောင်မှရမည် ဖြစ်သည် ။ ဇော် အောင် (မုံရွာ) ၁၅-မတ် လ-၂၀၁၄ 10 / 58
3/16/2014 လယ်ေ◌◌မြပြဿနာကြီး◌န◌ှင်◌့ေ◌လှ◌ျာ◌်ေ◌ကြးေ◌င http://mingalaronline.biz/mdg/2.agriculture/farm.land.price.in.myanmar.htm 1/4 လယ် မြေပြဿနာကြီးနှင့်လျှော် ကြေးငွေ မြန်မာပြည် အစိုးရပြောင်းသွားပြီးသည့် နောက် အိမ်မြေဈေးအရမ်းကြီးသွားပြီး၊ ဈေးပျက် သလိုဖြစ်နေသည် ။ လောလော
Personal development1 - Business
Personal development1 Nov 11, 2014 ... Mdg.milk.agruculture.rice.rural development1. Personality development Mdg.milk.Agruculture.rice.Rural Development1.
Cognitive development1 - Technology - documents
Cognitive development1 Dec 09, 2014 ... Mdg.milk.agruculture.rice.rural development1. Personality development Mdg.milk.Agruculture.rice.Rural Development1.
Dynamic.positioning - Scribd - Read books, audiobooks, and ...
Dynamic Positioning DP. Dynamic Positioning DP. Upload Sign in Join. ... Mdg.milk.Agruculture.rice.Rural Development1. Rual.lighting.bangaladesh ...
Power.Generation.Oil.Gas.Industies - Scribd - Read books ...
As development of Benson technology continued, boiler design soon moved away from the original concept introduced by Nark Benson. !n 1929, ...